ओलीलाई किन भेटिनन् सुष्माले? - Purbeli News
शनिबार, भाद्र ०३, २०७४
ओलीलाई किन भेटिनन् सुष्माले?
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २८, २०७४ समय: ६:४९:३३
काठमाण्डाै । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई नभेटी स्वदेश फर्किएकी छन्। बिमस्टेकको १५ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आएकी स्वराजले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता र मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेर फिरेकी हुन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
कुटनीतिक भ्रमणमा राजनीतिक भेटघाट हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता प्रायः छुट्दैनन्। अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार पोखरामा कार्यक्रम रहेकाले आफू व्यस्त रहेको सन्देश दिएपछि भेटवार्ता नभएको कुटनीतिक स्रोतले बताएको छ।
कार्यकारी प्रमुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासँग भेटवार्तापछि मात्र सम्बन्धको यथार्थ र गहिराइमा पुग्ने हुनाले त्यो खालको भेट हुने परम्परा हुन्छ। तर, स्वराजले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग पनि दुई पक्षीय छलफल गरिनन्। उनी महराकै निमन्त्रणामा नेपाल आएकी हुन्। – अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
नेपाली एनजिओद्धारा विदेशी एनजिओमाथि उजुरी, आफ्नो संस्थाको नाममा करोडौं घोटाला गरेको आरोप
कलेजो रोग, मोटोपन : लक्षण तथा उपचार
पूर्वेली समाचार प्रभाव : प्रबासी भुजेल समाज कतारबाट क्यान्सर पिडित भुजेललार्इ अार्थिक सहयाेग
दिल्ली पुर्‍याइएकी नेपाली चेली ३० जनाबाट बलात्कृत
यी हुन प्रधानमन्त्री देउवाका भारत भ्रमणका एजेण्डा
बेडरुममा नराख्नुहोस् यी चीज, सम्बन्ध नै टुट्न सक्छ